Global Voices teny Malagasy » Pakistana: Parachinar, ilay paradisa lasa helo · Global Voices teny Malagasy » Print
Pakistana: Parachinar, ilay paradisa lasa helo
Voadika ny 31 Jolay 2018 7:14 GMT 1	 · Mpanoratra Sana Saleem Nandika (fr) i Suzanne Lehn, imanoela fifaliana
Sokajy: Pakistana, Ady & Fifandirana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Vonjy Voina
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny 14 Mey 2009)
Parachinar  no foiben-toeran'ny Masoivohon'i Kurram ao amin'ireo Faritra ara-poko tantanana amin'ny fomba federaly  (FATA) ao Pakistana. Fonenan'ireo amperora maongola  rehefa lohataona ity faritra ity taloha, izay mitringitringry ao amin'ilay faritany afghana ao Paktia. Kanefa, saronan'ireo tahotra ateraky ny fikomian'ny talibàna taorian'ireo ady lavabe nataon'ny afghana nandritra ny taonjato 80 sy 90 ny hakanton'ny endritany. Ankehitriny, azon'ireo talibàna mpikomy ilay tanàna izay ampanjakàny ny tahotra, mahavoatery ny mponina hiala noho ny tahotra.
Tsy tranga vao haingana ilay fikomiana. Atolotry ny blaogera Razz ao amin'ny Waking Life  [amin'ny teny anglisy, toy ireo rohy rehetra voatanisa] ny topimaso haingana momba ny tantara fahiny:
Lasibatry ny fikomian'ny talibàna nanomboka tamin'ny fanafihan'ny Amerikana an'i Afghanistana i Parachinar sy ireo farittra sisintany hafa ao Pakistàna. Nanimba ny fizahantany tao amin'ity faritra ity ny ady naterak'izany, ary efa volana maro izay , potik'ireny fifandirana ireny ireo toerana mahafinaritra ireo, toy ny hafa (Swat, sns…).
Mandinika lalindalina kokoa  ny tantaran'ny fifandonana ara-pinoana ao amin'ny faritra i Ali Hassnain:
Parachinar no renivohitra fototra ho an'ny Masoivohon'i Khurram, ilay hany masoivoho (tsy misy dikany) izay shiita avokoa ao amin'ny FATA ny ankamaroany. Eo amin'ny 500.000 no totalin'ny isan'ny mponina, izay 55.000 ho an'ny tanàna shiita maro an'isa ao Parachinar. Nanjakan'ny shiita i Parachinar sy ilay sampandraharaha talohan'ny niantombohan'ny fibosesehan'ireo Sionita tamin'ny ady Amerikana – Rosia tao Afghanistan, rehefa nampiasa azy tamin'ny fanafihany tao Afghanistan ireo moujahidin. Misy fiakaran'ny herisetra ara-pinoana ihany koa miaraka amin'ny fiakaran'ny isan'ny Sionita fa, toa, haavo ambany kokoa ara-kalitao sy habetsahana noho izay nandrasana.
Nampangaina ho tsy manome fandrakofana mendrika ilay trangan-javatra ireo haino aman-jery tao Pakistana. Araka ny Press TV  :
Nisy fihaonana an-tampony natao vao haingana tao an-tanànan'i Qom, teo ambanin'ny faneva «Famonoana Tambabe ny Shiita tao Parachinar» ny fivoarambe iray, taorian'ny famonoana mpikambana anjatony maro avy tao amin'ny vondrom-piarahamonina shiita tao Parachinar sy Hangu nandritra ny enim-bolana farany.
Nametraka sakana ara-toekarena ho an'ireo faritra be mponina shiita ny mpikatroka mpomba ireo talibàna sy mifandray amin'ny Al Qaïda, izay toa ambadik'ireo famonoana ireo.
Ketraka amin'ilay fahanginan'ny haino aman-jery i Ammar Faheem, ao amin'ny Ammar 360 , raha toa heveriny ireo tranga ireo ho toy ny «Famonoana Tambabe ny shiita»:
Samy nahazo sarina faty voarasarasa sy fihetsika maneho habibiana avy amin'ny namana sionita sy shiita avokoa isika. Samy mahafantatra avokoa fa, isanandro, olona am-polony maro no lasibatry ny fifankahalana ara-pinoana ao amin'ity faritra ara-poko nahafinaritra fahiny tao Pakistana ity.
Ny zavatra tsy mety azoko dia ny fitazonan'ny haino aman-jery ny fahanginany mikasika ity olana voagana be ity. Aiza ilay rariny resahantsika? Aiza ireo feo miako ho an'ny zon'olombelona? Sa ve sahirana mikarakara kaonseritra sy filatroana lamaody izy ireo?
Nifanaraka ny tontolon'ny blaogy fa handray an-tanana ireo zavatra ireo ary hampita ny hafatra. Mbola mijanona mangina foana mikasika ilay famonoana ny haino aman-jery hatramin'izao. Mety hitondra mankany amin'ny fahasarotan'ny toe-javatra sy ny fipoahan'ny ady ara-pinoana ny fahanginana be loatra. Tsy tokony hijanona ho tsy re foana ny feon'ireo fianakavian'ny niharam-boina. Miray hina ny vondrom-piarahamonin'ny blaogera mba ho heno ny feon'izy ireo.
Tao anatin'ny iray tamin'ireo lahatsoratra ao amin'ny Pro-Pakistan , aroson'ny mpanoratra ny fanangonantsonia iray miangavy an'ireo olona avy amin'ny finoana hafa mba hanatevin-daharahana ireo mpiasa amin'ny maha-olona mba hanintonana ny saina hifantoka amin'ny krizy miseho amin'izao fotoana izao:
Efa folo taona izay, potika noho ny finoana ananany ny aina maro. Tsy misy manana zo hanasazy ny hafa noho ny finoany. Tsy antsika no mitsara ny hafa amin'ny resa-pinoana. Tokony ho ampangaintsika mandrakariva ireo mihevitra ny tenany ho Andriamanitra amin'ny fihetsika ataony ary mamono olona . Azo ampangaina ny fahanginan'ireo tomponandraikitry ny haino aman-jery. Fa tsy tokony hanakana antsika hanaparitaka ny vaovao izany. Manainga ireo rehetra ao amin'ny tontolon'ny blaogy aho mba hampita ny hafatra ao amin'ny blaoginy. Afaka mamerina ilay lahatsoratra ianareo, na mametraka rohy, fa tohizo foana ny fanaparitahana ny hafatra.
Amin'ny resaka aina sy ny finoana, manana zo mitovy ireo rahalahantsika shiita ireo. Manaja ny fiarahamiaina ny ankamaroan'ny silamo. Miampanga ireo manamarina ny hetsika izay ataony amin'ny anaran'ny fivavahana silamo isika. Satria fandeferana sy Firaisana no ampianarin'ny fivavahana silamo.
Noforonina ny blaogy ho an'ity fanentanana ity, izay mitondra ny lohateny hoe Fanohanana an'i Parachinar  mba hanamafisana ireny antso ireny, miaraka amin'ny tolokevitra sy fepetram-panampiana :
Manaraha vaovao mikasika ny zava-misy ianareo sy ireo olona manodidina anareo.
Mikarakarà fotoam-pivavahana, fiaretantory, sy atrikasa ao amin'ny vondrom-piarahamonina misy anareo (vondrona mpianatra, famakiamboky ho an'ny rehetra, fivavahana ny zoma, masikiriny sy foibena vondrom-piarahamonina, masoivoho sy fikambanana gazety). Manomàna peta-drindrina lehibe ianareo miaraka amin'ny sary sy vaovao voafintina.
Manoratra lahatsoratra misongadina sy taratasy ho an'ireo gazetinareo eny an-toerana sy manerana ny firenenareo, miaraka amin'ny fomba fijery tsara tohana. Manorata ihany koa ho an'ny governemantanareo sy ny vondrona eo an-toerana ary iraisam-pirenena mpiaro ny zon'olombelona. Mikarakarà fivoriana fanaovana peta-drindrina sy fanoratana taratasy ao anatin'ny vondrom-piarahamonina misy anareo.
Nafindra ho ao anatin'ny lohasahan'ny fahafatesana ilay firenena nantsoin'i Zulfiqar Ali Bhutto (praiminisitr'i Pakistana fahiny sady mpamorona ny PPP – ilay antoko eo amin'ny fitondrana ankehitriny) hoe paradisan'i Pakistana. Mila tonga saina amin'ny zava-mitranga ary mamaly ny antson'ireo iharam-boina mangingina amin'ny herisetran'ireo talibàna ny fianakaviambe iraisampirenena.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/31/123601/
 Agrandir la carte: http://maps.google.com/maps?f=q&source=embed&hl=en&geocode=&q=Parachinar,+Pakistan&sll=52.480787,13.281072&sspn=0.006443,0.019312&ie=UTF8&t=h&ll=36.22655,71.169434&spn=8.733527,19.775391&z=6&iwloc=A
 Faritra ara-poko tantanana amin'ny fomba federaly: http://fr.wikipedia.org/wiki/Régions_tribales_(Pakistan)
 Waking Life: http://razzita.blogspot.com/2008/09/parachinar-burns.html
 Mandinika lalindalina kokoa: http://nothingaddsup.blogspot.com/2008/09/investigating-parachinar-further.html
 Press TV: http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=87555
 Ammar 360: http://ammar360.com/2009/03/07/holocaust-of-shias-in-parachinar/
 Fanohanana an'i Parachinar: http://supportparachinar.blogspot.com/